Alshabaab oo sheegay iney Muqdisho ku qabteen tartan Qur’aan (Yaa ka hadlay?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Alshabaab ayaa sheegay in madaxa u qaabilsan gobolka Banaadir, Sheekh Cali Maxamed Xuseen (Cali Jabal) uu shalay meel ka mid ah Muqdisho ka furay tartanka Qur’aan aqriska degmooyinka gobolka Banaadir, kaasoo aan la sheegin goobta Muqdisho looga qabtay.
Cali Jabal oo codkiisa laga sii daayey warbaahinta Alshabaab, isagoo sheegaya inuu ka khudbeynayo meel ka mid ah gobolka Banaadir ayaa ku jeesjeesay dowladda Soomaaliya, wuxuuna ku tilmaamay kuwa aan waxba kala ogeyn.
Wuxuu sheegay Cali Maxamed Xuseen inuu aad ugu faraxsan yahay inuu gobolka Banaadir ka furo tartanka Qur’aanka Kariimka ah ee degmooyinka.
“Waxaan u mahad celinayaa walaalihii isku soo duba riday munaasabadda aan u fadhinyo ee ah furitaanka tartanka Qur’aan aqriska ee ay ku tartamayaan degoomyinka Wilaayada Banaadir, Alle ayaan uga mahadineynaa” ayuu yiri Cali Jabal.
“Maanta oo bishu tahay 21-ka Ramadaan 1435 Hirjiriya waxaan isugu nimid tartanka ardaydu ku tartamayaan Kitaabka Alle, waxaana ku tartamaayo degmooyinka Wilyaada Banaadir” ayuu sidoo kale yiri Cali Maxamed Xuseen.
Hadalka Cali Jabal waxaa ku jira isagoo sida muuqata qalbiga u dejinaya tododbanaan qof oo sida uu sheegay la joogay markii uu hadalkaan jeedinayey.
“Waxaa dhici karta in dad badan is yiraahdeen sidee magaalada Muqdisho ama Banaadir loogu qabanayaa tartanka Qur’aanka, ama dad badan cabsi iyo welweli lasoo gudboonaadaan, annagu Alle ayaan kaashaneynaa, kuna kalsoonahay, dadka kazoo qeybgalayna waxaan u sheegeynaa iney isaga ku kalsoonaadaan” ayaa ka mid ahaa hadalkii Cali Jabal.
Madaxa Alshabaab u qaabilsan gobolka Banaadir oo aan la xaqiijin karin halka uu hadalkaan ka jeediyey ayaa sheegay iney heystaan qolyo amaan ugu filan goobta uu sheegay in tartankaas lagu qabanayey.
“Wixii diktoonaasho amni ah waan qaadanay, annagoo ku kalsoon waroonkeena, waxaana rajeynayaa in tartanku qaab nabad ah noogu soo gebageboobo, marka wax cabsi ah yaan la muujin” ayuu sidoo kale yiri Jabal.
Dowladda Soomaaliya ayuu ku tilmaamay mid aan waxba kala garaneyn, sidaas darteedna aysan aheyn in laga baqo sida uu yiri.
“Nimankaan iyaga ah ee laga yaabo in dadka qaar ka baqaan, waxaan leehay ma taagna meeshii laga baqi lahaa, ama maba ah wax laga baqo, maxaa yeelay wax ay kala garanayaan iyo wax ay ogyihiin iyo wax ay fahim karaan ma jirto” ayuu Cali Jabal kula jeesjeesay dowladda Soomaaliya.
Markii uu Cali Jabal dhameystay khudbadiisa ayaa waxaa goobta ka hadlay nin kale oo aan magaciisa la sheegin, kaasoo dhowr arday oo yar su’aalo ka weydiiyey Qur’aanka Kariimka ah.
Codka la sii daayey waxaa ku jira caruur ku tartamaya Qur’aanka Kariimka ah, inkastoo aan la xaqiijin Karin goobta munaasabadaasi ka dhacday, iyadoo la ogyahaya in Alshabaab ay aad ugu horreeyaan adeegsiga warbaahinta iyo sida loola hadlo bulshooyinka.
Somalia and the United States Relations Back on Track